Dhageyso Qeybta Labaad Ee Wareysiga Sheekh Abuu Usamah. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Qeybta Labaad Ee Wareysiga Sheekh Abuu Usamah.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha hooose Sheekh Maxamed Abuu Usaama oo waraysi gaar ah siiyay Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa qeybta labaad ee waraysigaas oo xalay ku baxya barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada, wuxuu kaga halday heerka ay mareyso dacwada iyo fidinta diinta Islaamka.
Abuu Usaama wuxuu sheegay in iyagoo Allaah kaashanaya ay u suuragashey iney dacwada faafiyaan, islamarkaana dhidibada u taagaan maraakiiz islaami ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ku baranayaan diinta Islaamka.
Deegaanno badan oo fog fog ayay Wilaayadu geysay culimo iyo ducaad dadka gaarsiiya diinta Islaamka, waxaanu sheekhu sheegay iney si firfircoon dacwada uga socota guud ahaan gobolka deegaannada ay ka maamusho Wilaayada Islaamiga.
Dadka Reer baadiyaha ah ee jooga dhulka ka fog magaalooyinka ayaa sidoo kale ka faa’ideystay xamlada dacwo ee ay wado Wilaayada, waxaana Sheekhu sheegay iney inta karaankooda ah sii wadayaan iney dadka gaarsiiyaan diinta islaamka.
Marka laga soo tago cilmiga sharciga ee ay wilaayadu xooga saartay in lagu dhex faafiyo bulshada, waxaa kaloo jira cilmiga Technolgiyada iyo maadiga oo ay wilaayadu dhiiragelisay, waxaana magaalooyin ay ku jirto Kuunyo laga hirgeliyay madaaris lagu barto Computerka, iyo cilmiga maadiga noocyadiisa kala duwan.
Halkan ka dhagayso qeybta labaad waraysiga Waaliga Shabeellaha hoose Sheekh Abuu Usaama.